Uhlobo olutsha imveliso umgca granulating imveliso ikakhulu yamkelwa Pin Granulating Machine okanye idramu idini pin umatshini granlating, yinkqubo granulating ngokukhawuleza xa kuthelekiswa kwidiski okanye umatshini pan granulating. Isetyenziswa ikakhulu kwimveliso yegrisi yesichumiso somgquba, nayo inokusetyenziselwa ukuvelisa isichumisi sezimbiwa. Umatshini wokucoca emva komatshini wokukrola unokwenza iigreyina zokugqibela zibukeke ngakumbi. ayifanelekanga kwimicu ephezulu, nayo ayinakusetyenziselwa imveliso yesichumiso esimbaxa. Ukuba unomdla kule layini yemveliso, nceda ukhululeke ukunxibelelana nam ku-whatsapp okanye nge-imeyile.
Zininzi izinto zokwenza isichumiso semvelo, zinokwahlulwa zibe zezi ndidi zilandelayo:
1. Inkunkuma yezolimo: enjengomququ, isidlo seembotyi zesoya, ukutya komqhaphu, intsalela yamakhowa, intsalela ye-biogas, intsalela yomngundo, intsalela ye-lignin, njl.
2. Imanyolo yemfuyo neenkukhu: ezifana nomgquba weenkuku, iinkomo, iigusha nomgquba wehashe, umgquba womvundla;
3. Inkunkuma kwimizi-mveliso: ezinje ngeenkozo zesitili, iinkozo zeviniga, intsalela yomdumba, iintsalela zeswekile, iintsalela ezinoboya, njl.
4. Inkunkuma yasekhaya: njengenkunkuma yasekhitshini, njl.
5. Udaka lwasedolophini: njengodaka lomlambo, udaka lwelindle, njl.Ukuhlelwa kwezinto zomdiliya zaseTshayina: intsalela yamakhowa, intsalela yekelp, intsalela ye-phosphorus citric acid, intsalela yecassava, intsalela yeswekile yealdehyde, iamino acid humic acid, intsalela yeoyile, umgubo weqokobhe njl njl, ngaxeshanye, umgubo weqokobhe lamandongomane, njl.
6. Ukuphuhliswa nokusetyenziswa kwe-biogas slurry kunye nentsalela yenye yezinto ezibalulekileyo ekukhuthazeni i-biogas. Ngokweminyaka emininzi yolingo, ukusetyenziswa kwe-biogas slurry kunye nentsalela kunemisebenzi emininzi enje ngamasimi esichumiso, ukuphucula umhlaba, ukuthintela nokulawula izifo kunye nezinambuzane, kunye nokonyusa isivuno.
Ezona mfuno ziphambili ngumxholo wezinto eziphilayo ongaphezulu kwe-45%, iyonke i-nitrogen, i-phosphorus kunye ne-potassium izakhamzimba ezingaphezulu kwe-5%, inani elisebenzayo le-bacteria (cfu), i-100 yezigidi / g ≥0.2, kunye nokufuma okungaphantsi kwe-30%. PH5.5-8.0, umxholo wamanzi amasuntswana -20%.
I-Pin Granulating Imveliso yeLayini yeMveliso ye-Organic yesichumiso:
1. ukuchumisa nokutyumza kunye nenkqubo yokondla okuzenzekelayo
1.1. Inkqubo yokwenza umgquba okanye ukubila kwazo zonke iintlobo ezahlukeneyo zezixhobo
1.2. isichumiso sesichumiso somgquba, njengesityumzi setyathanga, iHammer Crusher, njl njl.
1.4. Umxube wokuxuba okanye wokuxuba ukufikelela kwi-100% yokuxubana ngokupheleleyo kwezinto nganye.
2.1. Pin Granulating umatshini umthamo ngaphantsi kwe 8t / h lo gama edityanisiweyo pin nomgqomo granulating umatshini umthamo ngaphezu 8t / h.
umthamo 3000mt / y 5000MT / Y 10000mt / y 30000mt / y 50000mt / y 10000mt / y 20000mt / y
Indawo icetyisiwe 10x4m 10x6m 30x10m 50x20m 80x20m 100x2m I-150x20m
Immimiselo yokuhlawula T / T. T / T. T / T. T / T. T / T / LC T / T / LC T / T / LC
Ixesha lokuvelisa Iintsuku ezili-15 Iintsuku ezingama-20 Iintsuku ezingama-25 Iintsuku ezingama-35 Iintsuku ezingama-45 Iintsuku ezingama-60 Iintsuku ezingama-90